Date My Pet » 5 Tips To Ingapukunyuka Long Distance Relationship – Student Edition
nguva Summer chinhu chinoyevedza chikamu mudzidzi haako. Hapana mubvunzo nezvazvo. Usvike kukanganwa pamusoro chaizvo chokwadi chikoro, faranuka zvishoma, kuwana kwenyu tani ari, kunwa fruity zvinodhaka kubva makokonati, uye reconnect nemhuri yako uye shamwari yekwako. Zvose zvinoita Zvechokwadi Pretty mukuru.
Kunze imwe duku akadzama ... unonzwa kukwana. Uri sezvinoita cône pasina aizikirimu. Kufanana Pizza pasina chizi, kufanana Miley Cyrus asina aparadze bhora, iri yoga Bonnie pasina Clyde yako.
Handisi kutaura pamusoro kuparadzaniswa yenyu pamapatya mapatya; Ndiri kureva kuti zvakaoma nguva muukama kuzivikanwa so "refu daro kuparadzana". Apedza mwedzi misere chinoshamisa kuchikoro pamwe wamaida, imi vaviri vane kudzokera kumusha kwako panzvimbo uye kudzidza mabote yokuva voga apo kuramba kuti inokosha chimvari.
Unogona kuva nyore uye kwakaitwa akanaka musikana rinotevera musuo uyo zvakaitika kuenda kuchikoro chete, kana unogona kuparadzaniswa ne makiromita, nyanza, pamwe kunyange makondinendi. Zvinovhiringidza vakaoma dzimwe nguva uye hapana nyore Feat kuramba kubatana yakanga akarigadzirira pamusoro kosi kwegore.
chinhu Zvakanaka chakanaka Ndiri pano, nokuti iwe.
Chekutanga, kuzvipira kunokosha.
Ndiyo hazvishamisi kuti chete vaya vakazvitsaurira kuna ukama hwavo ndicharizivisa okupedzisira. Duh. Heck ichi anoenda kweanoda kure ukama zvakare. Vasingakwanise kuona zuva nezuva mumwe kunoda kugara uye kwakawedzera nepfungwa nechido uye kuvimbika nokutsungirira kubva kumativi.
Shandisa zvose guru rwokugadzira, midziyo uye gizmos.
Tiri kurarama munyika-digital makombiyuta, dzeserura uye ubiquitous rwokugadzira. Shure pazuva yaiita mhanza chete kudana mumwe parunhare ... mazuva ano tinogona skype nomunhu munyika nokuda zvachose vakasununguka. Tine nyore, saka zvechokwadi panofanira kuva pembedzo. Technology iguru chishandiso kushandisa, kana iri nguva dzose mameseji kukurukura, kutaura parunhare, mumwe vasingaverengeki munzanga nevezvenhau nehoro kana Skype. Chishandisei urishandise kazhinji.
Distance pakati pako kukosha zvimwe anosika mikana iwe kuratidza vamwe okugadzira zvinhu uye ungwaru. Shandisa chaiwo nepepa chinyoreso chaiyo uye kutumira tsamba yekare zvechinyakare nzira, vakashamiswa wamaida nemaruva vakarwira kumba kwavo (kureva nhamba 2 uye kuti paIndaneti kubva maruva chitoro) kana kuita chaiwo kushamisika kushanya kana zvichibvira. Isa mafungiro ako chivharo pamusoro uye kuratidza vamwe kuti mavambo echokwadi.
Kugamuchira nguva uchiita kuwana kupedza pamwe chete.
Nokuti muchava vakatsaurirawo refu kudaro, kana musingavaregereri vanokwanisa kupinda kushanya uye rambai dzimwe adventures ichava hapana mubvunzo nakisa chinokosha. Handisi zvichava saizvozvo kudanana Chiitiko iri mvura kubva Notebook, asi zvichava zvakanaka pedyo.
Rangarira kuti haisi pakuguma kwenyika.
Ya zvinogona kuwana zvakaoma nguva uye uchafarirwa. uchida kugonya mukati fetus nechinzvimbo uye whimper (Ndagara ikoko- kunyara) asi yeuka kuti daro muchivande utano. Kuva kure mudiwa wako kuchakubatsira Unokoshesa nguva yako pamwe yakawanda uye uchava ajairire kugara tichikufunga. Saka nani kana ukatanga kuita ikozvino zvakanaka?
Regai izvi Mazano shanu ave kuda kwenyu wavakasarudza kwemwedzi chirimo uye iwe uchava wakarurama wakanaka. Uri Zvichida kuenda kukumbirwa miriyoni nguva "aripi imwe hafu yako?"Uye" muchiri kudanana what's-wake-zita?"Asi iye zvino unogona nechivimbo kupindura" Ndiri kugara kukurukura naye / her uye zvavari Parizvino kumba kwavo "uye" hungu, iwe Bet Ndini ".